Department of Border Trade
စီးပွား/ကူးသန်းထုတ် စာစောင်များ	ITC ကဒ်ဖြင့် ကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်သည့် စခန်းများ၏နယ်ပယ်သတ်မှတ်ချက်
သောကြာနေ့ 10 မေလ ၂၀၁၃ 15 :18 PM
စစ်တွေခရိုင်၊ မြောက်ဦးခရိုင်၊ ကျောက်ဖြူခရိုင်အတွင်းရှိ ဒေသနေပြည်သူများ
ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဒေသနေပြည်သူများ
မြစ်ကြီးနားခရိုင် နှင့်မိုးညှင်းခရိုင်အတွင်းရှိ ဒေသနေပြည်သူများ
မြိတ်နှင့် ထားဝယ်ခရိုင်အတွင်းရှိဒေသနေ ပြည်သူများ
ထန်တလန်၊ ဟားခါး၊ ဖလမ်း ဒေသအတွင်း ရှိဒေသနေပြည်သူများ
ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ရော်ဘာ တင်ပို့မှု ယခင်နှစ် ကာလတူထက် သုညဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်းပိုမိုခဲ့
အင်္ဂါနေ့ ၂၃ ဧပြီလ ၂၀၁၃ 14 :18 PM
ရော်ဘာအ များဆုံးတင် ပို့တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဟာ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်ဖေ ဖော်ဝါရီ လမှာ ရော်ဘာတန် ၂၈၈ တန် ကျော်တင် ပို့ခဲ့ပြီး ယမန်နှစ် ကာလ တူထက် သုည ဒသမ ၂ ရာခိုင်နှုန်း ပိုမိုတင် ပို့နိုင်ခဲ့ တယ်လို Internet သတင်း များမှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။ ထိုင်းကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ရဲ့ထုတ်ပြန် ချက်များ အရ ယခု နှစ်ဇန်န ဝါရီလ နဲ့ဖေဖော် ဝါရီလ (၂) လမှာ ရော်ဘာ ၅၉၂ တန်နီး ပါးထိုင်းမှ တင်ပို့ထားပြီး ယမန် နှစ်ကာလ တူမှာ ၅၆၅ တန်ခန့် တင်ပို့နိုင် ခဲ့တယ် လို့သိရ ပါတယ်။ ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီး ရှားနဲ့ မလေးရှား နိုင်ငံများဟာ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် အောက်တို ဘာလ ကစပြီး ပြည်ပသို့ တင်ပို့မှု လျှော့ချပြီး ရော်ဘာဈေး ကိုဆွဲတင် နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ ကြတယ်လို့ Bloomberg သတင်းမှာ ဖော်ပြ ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ရော်ဘာ အများဆုံး ထုတ်လုပ် တင်ပို့တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ဟာလာမဲ့ (၂) လမှာလည်း ပြည်ပသို့ ရော်ဘာ တင်ပို့မှုကို ဆက်လက် လျော့ချသွား မယ်လို့ မတ်လ နှောင်းပိုင်း မှာတာဝန်ရှိ သူများက ပြောကြား ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှားတို့နဲ့ သဘောတူ ညီထားချက်ဟာ မတ်လမှာ ကုန်ဆုံးပြီ ဖြစ်လို့ ယခု ကဲ့သို့ (၂) လထပ် တိုးလိုက် ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ အနေအထား အရ အခြေအနေ များဟာ ရော်ဘာ ဈေးများ ကိုကျဆင်း စေရန် ခြိမ်းခြောက် နေဆဲ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မိမိတို့ အနေနဲ့ပြည်ပ သို့ရော်ဘာ တင်ပို့မှုကို ၂ လထပ်မံ လျော့ချရန် ဆုံးဖြတ်ရခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ထိုင်းစိုက်ပျိုးရေး ဒုတိယဝန်ကြီးရဲ့ အကြံပေး Amnuay Patise က Reuters ကိုပြောကြား ခဲ့တယ် လို့သိ ရပါတယ်။ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီး ရှားနဲ့ မလေးရှား နိုင်ငံတို့ဟာ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ အောက်တို ဘာလ ၁ ရက်မှ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် မတ်လ ကုန်ထိ ရော်ဘာ တင်ပို့မှုကို တန်ချိန် ၃ သိန်းထိ သာတင်ပို့ရန် သဘောတူ ညီခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဧပြီလမှာ ကျင်းပမဲ့ အာရှရော်ဘာ ညီလာခံမှာ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ မလေးရှား တို့အနေနဲ့ မိမိတို့ကဲ့သို့ ဆက်လက် လျော့ချ လိုခြင်းရှိ မရှိသဘော ထားကို မေးမြန်းသွား မယ်လို့ Amnuay ကပြောပါတယ်။
Source: Reuters , Bloomberg CMK
ယိုကိုဟားမား တာယာ ကုမ္ပဏီရဲ့ အကျိုးစီးပွား နဲ့ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရေးအတွက် ကန်ဒေါ် လာ၂သန်း ကျော်ချေး ငွေရရှိ
အင်္ဂါနေ့ ၂၃ ဧပြီလ ၂၀၁၃ 11 :17 AM
Hangzhou Yokohama Tyre ကုမ္ပဏီသို့ Hangzhou မြို့နဲ့ Hangzhou စီးပွားရေးနဲ့ နည်းပညာ ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေး ဇုန်တို့မှ ကန်ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၂ သန်းကို ရရှိခဲ့တယ်လို့ ယိုကိုဟား မားရော် ဘာကုမ္ပဏီမှ ပြောကြား ခဲ့တယ်လို့ Rubbernews.com မှာ ဖော်ပြ ထားပါတယ်။ ထုတ်ပေး ခဲ့တဲ့ ချေးငွေဟာ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင် ဘာလမှ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် မတ်လ ထိကာလ အတွက်အကျုံး ဝင်ပြီး ကုမ္ပဏီရဲ့ စီးပွားရေး နဲ့ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရေးလုပ်ငန်း များအတွက် အသုံးပြု ရန်ဖြစ်တယ် လို့သိရပါတယ်။Hangzhou Yokohama Tyre ရဲ့ ထုတ်လုပ် နိုင်စွမ်းအား မျှော်မှန်း သည်ထက် ပိုမိုကြောင်း၊ ပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်း သိမ်းရေး ပိုင်းနဲ့စပ် လျဉ်းပြီး ထုတ်လုပ် မှုလုပ်ငန်း အဆင့် များတွင် လေထု ညစ်ညမ်းမှု ကင်းစင် စေရန်၊ ရေဆိုးသန့် စင်ရေးဆိုင် ရာလိုအပ် ချက်များ၊ စွမ်းအင် သုံးစွဲမှု လျော့ချရေးနဲ့ ရော်ဘာပင် ၂၄ဝဝဝ စိုက်ပျိုး နိုင်ခဲ့တယ်လို့ Hangzhou Yokohama Tyre ကုမ္ပဏီက ပြောပါတယ်။Hangzhou Yokohama Tyre ကို၂ဝဝ၃ ခုနှစ်က စတင် ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ် သမား ၁၂၅ဝ ကို အလုပ် အကိုင် ရှာဖွေ ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး နှစ်စဉ် Tyre ၅ ဒသမ ၁ သန်းကျော် ထုတ်လုပ် ပေးနိုင် စေခဲ့ တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source: Rubbernews.com CMK
အကောက်ခွန်မဲ့နဲ့ Engine Power လွဲမှားစွာဆိုင်ကယ်များတင်သွင်းမှုရှိနေ
အင်္ဂါနေ့ ၂၃ ဧပြီလ ၂၀၁၃ 10 :42 AM
အကောက်ခွန် ကြေငြာလွှာ ID နဲ့ဆိုင်ကယ် မျိုးစုံ စီးရေ ၁၂၅ စီးအ တွက် အခွန် ပေးဆောင် ထားသော်လည်း အကောက် ခွန်မဲ့ ဆိုင်ကယ်( Trsta 110 cc ) ၅ စီးနဲ့ Engine Power လွဲမှားပြီး New Ambo (125 cc) ၂ဝ စီး၊ Kanbo (125 cc) ၅ စီးနဲ့ Kanbo (110 cc) ၁၅ စီး စုစုပေါင်းဆိုင်ကယ် အစီး ၄ဝ အား နောင်ချိုမြို့ Asia World Gate မှာ အခြေပြု စစ်ဆေး နေတဲ့ Mobile Team အဖွဲ့-၁ မှာတာ ဝန်ရှိ သူများက မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့မှာ စစ်ဆေး တွေ့ရှိခဲ့ ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မူဆယ် ၁ဝ၅ မိုင်ကုန် သွယ်ရေးဇုန် ယာဉ်စစ် ကွင်းမှ စစ်ဆေး ခံခဲ့ပြီး ထုတ်ပေး ထားတဲ့ ID မှာ Trsta 110 cc ၅ စီး၊ Super Ambo 125 cc ၃၅ စီး၊ Super Ambo 100 cc ၁၅ စီး၊ Dayun 110 cc ၅ စီး၊ New Ambo 100 cc ၂ဝ စီး၊ Kanbo 110 cc ၁၅ စီး၊ Kanbo 125 cc ၁ဝ စီးအတွက် ကျသင့်ခွန် ပေးဆောင် ပြီးသယ် ယူလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ယာဉ်တစ်စီး လုံးချစစ် ဆေးရာမှာ စစ်ဆေး တွေ့ရှိရတဲ့ အကောက်ခွန် မဲ့ဆိုင်ကယ် ၅ စီးနဲ့ Engine Power အလွဲ ဆိုင်ကယ်အစီး ၄ဝ ကို လုပ်ထုံး လုပ်နည်း များနဲ့အညီ အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာနသို့ ဆက်လက် အပ်နှံသွား မယ်လို့ သတင်း ရရှိပါတယ်။Mobile Team အဖွဲ့ ၁ အနေနဲ့ ဖေဖော် ဝါရီလ ၁၄ ရက်မှ မတ်လ ၂၆ ရက်ထိ ကာလ အတွင်းမှာ စုစု ပေါင်းစစ် ဆေးရှာဖွေပြီး အကောက် ခွန်ဦးစီး ဌာနသို့ အပ်နှံထားတဲ့ တန်ဖိုး မှာကျပ် ၉၃၆ သန်းနီးပါးရှိပြီလို့ သိရပါတယ်။
Source: လရ-၁ MTN
တနင်္လာနေ့ ၂၂ ဧပြီလ ၂၀၁၃ 16 :27 PM
စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနသည် နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲ မှုမူဝါဒ များကို အောင်မြင်အောင် အကောင် အထည် ဖော်ဆောင် ရွက်နိုင် ရေးအ တွက် ပြုပြင် ပြောင်းလဲ မှုလုပ်ငန်း စဉ်များ ကို ချမှတ် အကောင် အထည် ဖော်ဆောင် ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ယင်းသို့ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင် ရွက်လျက် ရှိရာတွင် စီးပွားရေး နှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ် ရေးဝန်ကြီး ဌာန အောက်ရှိ ဦးစီး ဌာနများကို ခေတ်စ နစ်နှင့်အညီ လိုက်ပါ ပြောင်းလဲဆောင် ရွက်နိုင် ရေးအတွက် ဦးစီးဌာန၏ အမည်နှင့်လုပ်ငန်း စဉ်များ ကိုပါ ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်း ဝယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနအောက်ရှိ နယ်စပ်ကုန် သွယ်ရေးဦးစီး ဌာနအား ကူးသန်း ရောင်းဝယ် ရေးနှင့်စားသုံး သူရေးရာ ဦးစီးဌာန အဖြစ်သို့ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့မှစ၍ ပြုပြင်ပြင် ဆင်ပြောင်း လဲဖွဲ့စည်းခဲ့ ရာတွင် အဆိုပါ ဦးစီးဌာ နအနေဖြင့် ခေတ်စနစ် နှင့်လိုက် လျောညီ ထွေဖြစ်သည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အသစ်နှင့် အတူ လက်ရှိ လုပ်ငန်း တာဝန်များ အပြင် လုပ်ငန်း တာဝန် အသစ် များကိုပါ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကူးသန်း ရောင်းဝယ် ရေးနှင့်စား သုံးသူရေး ရာဦးစီးဌာန အောက်တွင် စားသုံးသူ အကာ အကွယ် ပေးရေး မူဝါဒနှင့် ဥပဒေ ဆိုင်ရာ၊ ယှဉ်ပြိုင်မှု မူဝါဒနှင့် ဥပဒေဆိုင်ရာ၊ ကုန်အမှတ် တံဆိပ်များ လျှောက်ထား မှုစိစစ် ရေးဆိုင်ရာ ဌာနခွဲများ နှင့်ဌာန စုများကိုလည်း တိုးချဲ့ ထည့်သွင်း ဖွဲ့စည်းထား ပါသည်။ အဆိုပါ ဌာနခွဲ များနှင့် ဌာနစု များတွင် တာဝန် ယူရမည့် ကိစ္စရပ် များမှာ ဘာသာ ရပ်အသစ်၊ လုပ်ငန်း တာဝန် အသစ်များ သဖြင့် ယင်းဘာ သာရပ်များ နှင့်ပတ် သက်ပြီး ကျွမ်းကျင် ပညာရှင် များကို ကူးသန်း ရောင်းဝယ် ရေးနှင့် စားသုံး သူရေးရာ ဦးစီးဌာနမှ အရည်အ ချင်းအလိုက် ရာထူးများ ခန့်အပ် တာဝန်ပေး အပ်သွား နိုင်ရေးသက် ဆိုင်ရာသို့ တင်ပြ ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ အဆိုပါ ဘာသာ ရပ်ကျွမ်း ကျင်သူများ အနေဖြင့် အမြဲတမ်း ဝန်ထမ်းအဖြစ် တာဝန်ထမ်း ဆောင်ရန် စိတ်ဝင်စားပါက ကူးသန်း ရောင်းဝယ် ရေးနှင့်စား သုံးသူ ရေးရာ ဦးစီးဌာနသို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်း လျှောက်ထား နိုင်ကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။
Source: ဒသက (နပတ) ( DCCA )
တာဝန်မသိပါက နိုင်ငံတော်မှ ရည်မှန်းချီ တက်နေသည့် ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်း ကြာလေ ဝေးလေဖြစ်လာနိုင်
ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ စစ်တွေနယ်စပ်တွင် တစ်ဦးတည်းပိုင် ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်ကတ် (ITC) နဲ့ကုန်သွယ်မှုပြုနိုင်ပြီ
အရည်အသွေး စစ်ဆေးမှု Procedure
ဓာတ်မြေသြဇာ၊ ပိုးသတ်ဆေး များမှာတွေ့ ရှိနိုင်တဲ့ အရည်အသွေး ပြဿနာများ
<< Start < Prev 1234567 8910 Next > End >>	JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL	MINISTRY OF COMMERCEBuilding 3, Nay Pyi Taw, The Republic of Union of Myanmar.Tel: 067 - 408002, Fax: 067 - 408004Email: mochmo@moc.gov.mm, mocdhmo@moc.gov.mm@2011 Ministry of Commerce. All rights reserved. Powered by Inforithm-Maze
www.commerce.gov.mm	Visitors 3857873 Since June 2008